KOLONTSAINA SY NY SERASERA : “Ho taratry ny fitiavan-tanindrazana ny Hetsika Tagnamaro”
Nitondra fanazavana mahakasika ny hetsika Tagnamaro ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Kolontsaina sy ny Serasera tamin’ny alalan’ny tale jeneraliny, Fanahimana Tiaray. 24 mars 2019
Anisany nohazavainy tamin’ izany fa hamohazana indray ny tena fitiavan-tanindrazana ao anatin’ny fon’ny olom-pirenena tsy an-kanavaka ny hetsika Tagnamaro. Tsy ho tombontsoan’ny mpitondra akory, hoy izy, na ho tombontsoan’ny minisitera izay tompon-kevitra fa ho tombontsoan’ny olon-drehetra tsy ankanavaka mihitsy satria ny tontolo manodidina azy manokana no voadio. Araka ny fanazavana noentiny hatrany dia tolo-kevitra nomen-dramatoa Minisitry ny Kolontsaina sy ny Serasera, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo tao anatin’ny fandaharan’asany izay nosoniaviny sy natolony (contrat programme) tamin’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta io hetsika Tagnamaro io.
Tao anatin’io fandaharan’asa amin’ny ankapobeny izay natolotry minisitra io nataony ho andro fanadiovana ho an’ny daholobe fotsiny saingy rehefa nisy ny fifandinihana teo anivon’ny minisitera dia navadika ho “Hetsika Tagnamaro andron’ny olom-pirenena”. Hetsika natao ihany hamerenana indray ilay soatoavina Malagasy izay ifantohan’ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana eo amin’ny samy mpiara-belona rehefa misy ny asa hatao. Tsy misy valaka amin’izay ny “Hetsika Tagnamaro”, vondron’olona maromaro no hifanome tanana ary hisafidy toerana iray hanaovan’izy ireo asa mivaingana iray.
Mety ho fanadiovana, mety io fanavaozana ary tsy voatery ho tranom-panjakana na toeram-panjakana ihany fa izay hifaneken’ny rehetra dia afaka hatao avokoa na sekoly, lalana, hopitaly, zaridaina, sns… hoy ny fanazavana noentin’ny tale jeneralin’ny Minisitera. Indray mandeha isam-bolana no hanaovana ny “Hetsika Tagnamaro andron’ny olom-pirenena”, tanterahina isaky ny sabotsy fahatelon’ ny volana. Ny amin’ity volana ity dia amin’ny sabotsy 30 marsa ho avy izao no hisantarana izany manerana ny Nosy.
Nambaran’ ny tale jeneralin’ny Minisiteran’ny Kolontsaina sy ny Serasera, Fanahimana Tiaray fa efa mihetsiketsika amin’izany daholo ireo rantsan’ny minisitera eny anivon’ny Faritra. Notsindriany fa tsy voatery ity minisitera tompon-kevitra ity irery ihany no afaka mandray anjara fa ny minisitera rehetra dia afaka mifandrimbona araka izay fandaharam-potoanany avokoa. Tahaka izany ihany ireo fikambanana isan-tsokajiny, ny sekoly, ny sampan-draharaham-panjakana maro samihafa. Ny finiavana sy ny fahatongavan-tsaina, ary ny fitiavan-tanindrazana ao am-pon’ny olom-pirenena tsirairay no andrasana ao anatin’ity hetsika ity.